Photo Scrapbook Software Review - Best Digital Scrapbook Mmemme
> Resource> Atụmatụ> Digital Scrapbooking Software Review
Omenala scrapbooking bụ ihe dị oké ọnụ, nrụsi ma na-ewe nkà ụdị. Dị iche iche si omenala scrapbooking, dijitalụ scrapbooking ịzọpụta gị oge na ego, na-enyere gị iji chebe ọtụtụ echeta na nkeji. Na dijitalụ scrapbooking software, ị nwere ike ike ọ bụla foto ma ọ bụ ihe oyiyi na-dijitalụ scrapbooking. Na a nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu, ị nwere ike ngwa ngwa na-adị mfe ịgbanwe oké ọnụ ahịa photos n'ime oké ọnụ ahịa na-echeta. Dị nnọọ ka m na-nchegbu, kasị mma dijitalụ scrapbooking software ga e dere n'okpuru atụmatụ:
Nza nke ndebiri na layouts
Kensinammuo foto importing interface
Ike foto edezi ikike
Lee ndị n'elu-gosiri dijitalụ scrapbooking software nke nhọrọ anyị, dị na n'elu dijitalụ scrapbooking software ibiere.
Picasa bụ otu flashy na ọtọ free foto management na-edezi software nke-enye gị ka collage si ndebiri. N'ihi na ọkachamara, i nwere ike na-atụ anya ka mma nzukọ na-achọ ike si Google search results. Otú ọ dị, Picasa-anọgide na-magburu onwe oke maka beginners na ukporo dijitalụ shooters ndị chọrọ mfe ịchọta ha niile foto, idozi ha neatly n'ime albums, ka mara mma foto collages, ma na-eso ndị enyi na ezinụlọ.
Na-eme isi aga-eme maka free
Na-enye mma red-anya mwepụ, ngwa fixes na mmetụta, na online nkekọrịta nhọrọ karịa ndị ọzọ na foto collage & software.
Wụt gị foto dị ka a slide show nkiri, collage ma ọ bụ omenala screensaver.
Adabara ukporo na-abụghị techies dijitalụ foto.
Ọ bụghị otú ahụ ọtụtụ foto collage ndebiri jiri ya tụnyere Photo Collage Studio.
Apụghị ime ka foto akwụkwọ, ekele kaadị na kalenda.
Kegide a nchekwa dabeere na usoro nke nzukọ.
Limited nzukọ na-achọ atụmatụ.
Free GIMP software enye ihe complexity.
Free Image Jisie Program - GIMP
GIMP, aka, GNU Image Jisie Mmemme na-ekesa na ọtụtụ ndị na-eji dị ka foto retouching, image mejupụtara & authoring.
A mmemme multi-ọtọ. Ị nwere ike iji ya a dị mfe agba omume, a ọkachamara foto retouching omume, ihe online ogbe nhazi usoro, a uka mmepụta image renderer, ihe oyiyi format Ntụgharị, wdg
Ọzọkwa, GIMP nwere ike ịmepụta dijitalụ scrapbooking for free. Dị mma, good? N'ezie, GIMP bụ a dijitalụ scrapbooking freeware na a na-ewere dị ike dị ka Adobe Photoshop. Ị nwere ike ịga www.gimp.org n'ihi na ihe free dijitalụ scrapbooking ndabere, free Nkuzi, free brushes na na.
Advanced Scrapbook Software - Photoshop Ihe
Adobe Photoshop Ihe bụ mfe na mfe version nke Adobe Photoshop. Nke a dijitalụ scrapbooking software agwakọta ike na mfe otú ị nwere ike ịmepụta dijitalụ scrapbooking na gị dijitalụ photos. Mee ka gị na photos anya ha kacha mma ọ bụla gị larịị nke edezi ahụmahụ --a enyi na enyi ọhụrụ imewe na kwụpụ-site-nzọụkwụ edezi aka enyere gị aka ịmalite. Mfe ịrụ nnọọ elu-larịị ime na retouching ekele ịtụnanya dee ike, mfe image-nhọrọ ngwaọrụ. Na mgbe ahụ na-ele niile gị dijitalụ photos na ala.
Ọkachamara, Ike ma mfe iji
Ndenye foto search
Ịtụnanya nyo mmetụta
Mfe ịkọrọ na web
Nzọụkwụ na-nzọụkwụ aka
Ọ dịghị dijitalụ scrapbooking ndebiri
Nkpoda mmụta usoro
Ọ bụghị otú ahụ mfe n'ihi na malite scrapbookers
Ná mmechi, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na ọkachamara ma ọ bụ ọkara ọkachamara, ma ọ bụ maara na Adobe Photoshop CS, Adobe Photoshop Ihe bụ nnọọ ndị kasị mma dijitalụ scrapbooking software. Ị pụrụ ọbụna ike ọkaibe ma mara dijitalụ scrapbooking site na ọkọ, adịghị eji ihe ọ bụla tupu mere dijitalụ scrapbooking template ma ọ bụ dijitalụ scrapbooking embellishment.